ဒီကနေ့ နေ့လည်ပိုင်းက မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ရုံး အစည်းအဝေးခန်းမမှာ မကွေးမြို့နယ် (ကုန်းတွင်းရေနံလုပ်ကွက် အမှတ် RSF -5)အတွင်း ရေနံစမ်းသပ်တူးဖော်မဲ့လုပ်ငန်းအတွက် လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန မြန်မာ့ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ လုပ်ငန်းရဲ့ထုတ်လုပ်မှုအပေါ် ~ Myaylatt Daily.
ဒီကနေ့ နေ့လည်ပိုင်းက မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ရုံး အစည်းအဝေးခန်းမမှာ မကွေးမြို့နယ် (ကုန်းတွင်းရေနံလုပ်ကွက် အမှတ် RSF -5)အတွင်း ရေနံစမ်းသပ်တူးဖော်မဲ့လုပ်ငန်းအတွက် လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန မြန်မာ့ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ လုပ်ငန်းရဲ့ထုတ်လုပ်မှုအပေါ်
9:18 PM ရုပ္/သံ သတင္း No comments
ဒီကနေ့ နေ့လည်ပိုင်းက မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ရုံး အစည်းအဝေးခန်းမမှာ မကွေးမြို့နယ် (ကုန်းတွင်းရေနံလုပ်ကွက် အမှတ် RSF -5)အတွင်း ရေနံစမ်းသပ်တူးဖော်မဲ့လုပ်ငန်းအတွက် လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန မြန်မာ့ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ လုပ်ငန်းရဲ့ထုတ်လုပ်မှုအပေါ် ခွဲဝေခံစားရေး စာချုပ် ချုပ်ဆိုပြီး အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ ENI Myanmar B.V ကုမ္ပဏီက မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ ခွင့်ပြုချက်နဲ့ဆောင်ရွက် တဲ့မြေနေရာ (၁၅.၂၈)ဧကအတွက် မြေစာရင်းပုံစံ(၇)မူရင်းနဲ့ မူလပိုင်ရှင်တောင်သူ(၇)ကို မြေယာတန်ဖိုးနဲ့ သီးနှံနစ်နာကြေး စုစုပေါင်းတန်ဖိုးငွေကျပ်(၂၁၀၆. ၄၀၇၀၀) (နှစ်ထောင့်တစ်ရာခြောက်သိန်း လေးသောင်းခုနှစ်ရာ) ပေးချေပြီး မြန်မာ့ရေနံနဲ့ သဘာဝဓာတ်ငေ့ွ လုပ်ငန်းမြေအမည်ပေါက် အရောင်းအဝယ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုတဲ့ အခမ်းအနားပြုလုပ် ခဲ့ပါတယ်
ဒီကေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းက မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံး အစည္းအေဝးခန္းမမွာ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ (ကုန္းတြင္းေရနံလုပ္ကြက္ အမွတ္ RSF -5)အတြင္း ေရနံစမ္းသပ္တူးေဖာ္မဲ့လုပ္ငန္းအတြက္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ငန္းရဲ႕ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ခြဲေဝခံစားေရး စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ ENI Myanmar B.V ကုမၸဏီက မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ေဆာင္႐ြက္ တဲ့ေျမေနရာ (၁၅.၂၈)ဧကအတြက္ ေျမစာရင္းပုံစံ(၇)မူရင္းနဲ႔ မူလပိုင္ရွင္ေတာင္သူ(၇)ကို ေျမယာတန္ဖိုးနဲ႔ သီးႏွံနစ္နာေၾကး စုစုေပါင္းတန္ဖိုးေငြက်ပ္(၂၁၀၆. ၄၀၇၀၀) (ႏွစ္ေထာင့္တစ္ရာေျခာက္သိန္း ေလးေသာင္းခုႏွစ္ရာ) ေပးေခ်ၿပီး ျမန္မာ့ေရနံနဲ႔ သဘာဝဓာတ္ေင့ြ လုပ္ငန္းေျမအမည္ေပါက္ အေရာင္းအဝယ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုတဲ့ အခမ္းအနားျပဳလုပ္ ခဲ့ပါတယ္